Mpanamboatra fandriana hopitaly fiasa ho an'ny hopitaly tsara indrindra Manual Manual Webian
Fandriana ICU misy torolàlana dimy
Vovoka vy mivalona vy
Hoso-doha mandroso sy miverina
Kidoro, tsato-kazo IV, farango kitapon-drano, lambam-baravarankely, latabatra tafalentika
Boky torolàlana momba ny fandriana hopitaly miasa dimy
6. tontonana tongotra
7. Takelaka tongotra
8. Crank ho an'ny oveall hirosoana
9. Crank amin'ny fampiakarana miverina
10. Crank amin'ny fampiakarana tongotra
11. Crank ho an'ny lamosin'ny oveall
Izy io dia mety amin'ny fikolokoloana sy fanasitranana ny marary ary manamora ny fikarakarana isan'andro ny marary.
1. Ny fanaraha-maso ny fandriana amin'ny hopitaly dia tokony harahin'ireo matihanina.
2. Ny olona lava kokoa noho ny 2m ary mavesatra noho ny 200kg dia tsy afaka mampiasa ity fandriana ity.
3. Olona iray ihany no tokony hampiasa an'io vokatra io. Aza mampiasa olona roa na maromaro miaraka.
4. Ny vokatra dia misy fiasa telo: fampiakarana miverina, fampiakarana tongotra, fanamafisana ny ankapobeny amin'ny ankapobeny, fihodinan'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny ary fisandratana ankapobeny.
Ny lafiny anatiny amin'ny solaitrabe sy ny solaitran-tongotra dia miampy inlay mihantona. Ny tsanganana metaly roa mifampitohy eo amin'ny lohan-doha sy ny takelaka dia tsindriana amin'ny hery midina mitsivalana mba hametahana ireo andry metaly miakatra ao anaty làlam-pandrefesana miverimberina, ary mihidy miaraka amin'ny faritry ny takelaka sy ny takelaka.
Ity fandriana hopitaly ity dia misy cranks telo, ny fiasan'izy ireo dia: fampiakarana miverina, fisandratana amin'ny ankapobeny, fampiakarana tongotra.
1. Fitrandrahana fialan-tsasatra eo an-damosina: Ahodino ny crank amin'ny famantaranandro, ny fiakaran'ny tontonana aoriana
2. Fananganana fitsaharana tongotra: Ahodino ny crank amin'ny fihodin-tany, ny fananganana ny tontolon'ny tongotra
Ahodino ny crank mifanohitra amin'ny famantaranandro, midina ny vodin-tongotra.
3. Mandrosoa amin'ny ankapobeny: Ahodino ny crank famantaranandro, ny fisondrotan'ny loha amin'ny ankapobeny
Avadiho miankavia ny crank, ampitodiho ambany ny loha.
4. Miverina miverina amin'ny ankapobeny: Ahodino ny crank mifanohitra amin'ny famantaranandro, ny fisondrotan'ny sisin'ny tongotra amin'ny ankapobeny
Avadiho miankavia ny crank, ny sisin'ny tongotra amin'ny ankapobeny.
5. Fisandratana ankapobeny: Atodiho ny vilanin'ny famantaranandro miandalana amin'ny famantaranandro, ny fisondrotan'ny lohan'ny loha amin'ny ankapobeny, avy eo ahodino ny valahana amin'ny ankapobeny miverin-dalana, ny sisin'ny tongotra amin'ny ankapobeny;
Ahodino ny crank an'ny lamosina miverina miankavia amin'ny ankapobeny, ny lafiny tongotra amin'ny ankapobeny mankany ambany, avy eo ahodino ny crank mifanohitra amin'ny famantaranandro, ny loha amin'ny loha midina.
6. Rehefa miasa ny asan'ny fampiakarana miverina, ny fampiakarana ny tongotra ary ny fampiakarana amin'ny ankapobeny, aza apetraka eo anelanelan'ny elanelan'ny farafara sy ny takelaka fandriana na ny arofanina ny tongotra aman-tànana, hialana amin'ny fahasimban'ny rantsan-tongotra.
7. Amin'ny toe-javatra tsy misy mpiambina dia tokony tazonina amin'ny haavon'ny ambany indrindra ny fandriana hampihenana ny mety haratra raha mianjera avy eo am-pandriana ilay marary mandritra na ivelan'ny fandriana.
Teo aloha: Fandriana hopitaly miasa telo
Manaraka: Boky fandriana hopitaly miasa telo